Delta Chikumbiro Technics BVBA peji
Delta Chikumbiro Technics inopa mhinduro dzekuparadzira adhesive. Tinogona kupa zvinyorwa, otomatiki kana switchkey mhinduro dzekugadzira kwako. Ndokumbira kuti utibate kuitira rumwe ruzivo.
Nei uchishanda @ Delta Application Technics
Multi chikamu chehurongwa
Mhepo isina tsvina
Pfuti / mavharuvhu
Yakapisa cartridge pfuti
SS Pressure ngarava
Pombi / dosing mitambo
Delta Application Technics inopa mhinduro mumisika yakawanda
Kuzvigadzirira pre-kurapwa uye glue kuendesa kune musangano weinoumbwa chikamu chikamu chombo
Inodzorwa glue metering uye kuendesa kune iyo musangano wechiremu uremu sutukezi neCURV tekinoroji
Plastiki kurongedza / zvinwiwa
Automated glue application yekugadzirisa PE inobata mhete paPET kegs
Kubva pane yekutanga kutaudzana kusvika pakutengesa mushure mekubatana kwakanaka kwazvo!
Isu takanga tine ruzivo neDelta Zvikumbiro zvekunyatsochinja-chinja uye kutibatsira pane pataida ivo!
Kubata mumashure kwaive zvakare kwakakwana!
Solutions yeindasitiri yekushandisa
KUKONESA / KUONESA
KUDENGA / KUFUNGA
Verenga zvimwe +
© Delta Chikumbiro Technics. All rights rights rights rights rights rights rights
Iyi itsika isina password.
Ndokumbira utore yako kambani email kero.
Chinongedzo chinotumirwa kwauri pakarepo.
Vashandisi vasingazivikanwe vanozoiswa pasi pekutanga kubvumirwa.
Akaunti yako yakagadziriswa, unogona ikozvino log-ku account yako.
Ndokumbirawo ubvumire vatariri vedu imwe nguva kuti vadzose account yako.
Yako yekunyoresa link yatotumirwa kune yako e-mail. Ndokumbira utarise yako Inbox uye Spam folda. Iyo nyowani yekunyoresa yekubatanidza ichagadzirwa uye inotumirwa netsamba pakunopinda chete mushure 24 maawa
Yako yeinternet yekunongedza yekubatanidza yakatumirwa kune yako e-mail. Ndokumbira utarise yako Inbox uye Spam folda. Iyo itsva otomatiki yekudhinha yekubatanidza ichagadzirwa uye inotumirwa netsamba pakunopinda chete mushure 120 maminitsi
Ndokumbira usimbise yako kero ye-e-mail nekudzvanya pane iyo link yatumira kune yako e-mail.
Ndokumbirawo kushandisa yako e-mail kupinda.
Tsamba ine iyo log yekubatanidza yakatumirwa kwauri.
Nezvikonzero zvekuchengetedza iyo email inotumirwa ku . Ndokumbirawo ubaye pane iyi link mukati me email iyi kuti uwane kuzere kwewebhu
Tsamba ine link yekunyoresa yakatumirwa kwauri. Ndokumbira utarise yako Inbox uye Spam folda. Icho chinongedzo chakabvumirwa 24 maawa.
Tarisa mukati / KUNYORA
Log yekupinda inongogona kushandiswa chete kubva kune inotangira komputa.
Maseva edu akabatikana, ndapota edzaizve gare gare kana kutibata nesu.
Maseva edu akadzosa chikanganiso, ndapota edza zvakare gare gare kana kutibata nesu
Maseva edu akadzosa chimiro chisina kukwana, ndapota edza zvakare gare gare kana kutibata nesu.
Chinongedzo chako chekupinda chakapera. Ndokumbirawo ushandise e-mail yako kuti ugadzire imwe in-log in-link.